हात्तीले या:त्रु बा’हक नाइट बसमाथि झ;म्टन खो’जेपछि , भिडियो बन्यो भा’इरल ! – Life Nepali
हात्तीले या:त्रु बा’हक नाइट बसमाथि झ;म्टन खो’जेपछि , भिडियो बन्यो भा’इरल !
काठमाडौं। अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल बनेको छ । जहाँ एक हात्तिले बसको बाटो छेक्छ । बुद्धिबहादुर गुरुङले उक्त भिडियो फेसबुकमा राखेका हुन् । उनका अनुसार हात्तीले काठमाडौंबाट माँडीहुँदै ठोरी चल्ने नाइट बसको बाटो छेकेको हो । शनिबार उक्त घ’टना घ’टेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार चौतारा भन्दा माथिल्लो अमुवा पोष्ट नजिकै एउटा माउते हात्तीले बसको बाटो छेकेको थियो ।
हा’त्तीको आ’क्रमणबाट जोगाउन उक्त बसका ड्राइभर बढो सा’वधानी अपनाएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । उनले प्रे’सर ‘ह’र्न हा’नेर हात्तिलाई भगा’उन सफल भएका छन् । हर्न बजाउँदा हात्ति बस नजिकै आएको थियो । हात्ति नजिकै आएको देखेर बसमा सवार रहेका यात्रुहरु ड’राएर चि’च्चाएको भिडियो प्रष्ट सुन्न सकिन्छ । ड’राएका यात्रुहरुलाई सान्त’वना दिँदै नचि’च्याउन आग्रह गर्दै ड्राइभरले लगातार प्रेसर हर्न बजाए पछि हात्ती आफ्नो बाटो लागेको थियो ।
यसैबीच, जंगली हा;त्तीको आ;क्रमणबाट चितवनको माडीमा २ जनाको ज्या:न गएको छ । माडी १ बरुवाका ६५ वर्षीय बाबुराम पौडेल र उनका छोरा ३५ वर्षीय राजु पौडेल मोट;रसाईकलमा बरुवाबाट बादर झु;लातर्फ गइरहेको बेला शनिबार बिहान जं;गली हा;त्तीले आ;क्रमण गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चितवनले जनाएको छ । दुवै ज’नाको घ’टनास्थ’लमै मृ’त्यु भएको चितवनका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक एक नारायण कोइरालाले पुष्टि गरेका हुन् । एक महिना अघि पनि माडी मै जंगली हात्तिको आ’क्रमणमा एक वृ’द्दाको मृ’त्यु भएको थियो । हेर्नुहोस यस्तो छ भिडियो’
Previous मलाई पारस सरकारले पि’ट्नुभ’यो भ’न्दै मिडियामा आइन सोनिका, यस्तो छ कारण ?
Next ठमेलको नाइटक्लबमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र हिमानीको डान्स हेर्नुहोस् तस्बिर र भिडियोमा !